စိန့်လောရင့်စ်မြစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
စိန့်လောရင့်စ်မြစ်(Saint Lawrence River) (ပြင်သစ်ဘာသာ: fleuve Saint-Laurent; Tuscarora: Kahnawáʼkye; Mohawk: Kaniatarowanenneh, အဓိပ္ပာယ်မှာ "ရေလမ်းကြောင်းကြီး"ဖြစ်သည်)သည် မြောက်အမေရိက အရှေ့ဘက်တွင်ရှိသော ကြီးမားသည့် မြစ်ကြီးဖြစ်သည်။ ထိုမြစ်ကြီးသည် ကနေဒါနိုင်ငံ ကယူးဘက် ပြည်နယ် အွန်တရီအို နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူး‌ယောက်မြို့အကြားဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေပြီးလျှင် ကနေဒါနိုင်ငံ မွန်ထရီရယ်မြို့ တလျောက် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည်။ အဆိုပါမြစ်သည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ တတိယမြောက်အကြီးဆုံးမြစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
စိန့်လောရင့်စ်မြစ်(Saint Lawrence River)
အလက်ဇန်းဒဲယား အနီးရှိ စိန့်လောရင့်စ်မြစ်
၇၄.၇ m (၂၄၅ ft)
49°30′N 64°30′W﻿ / ﻿49.500°N 64.500°W﻿ / 49.500; -64.500ကိုဩဒိနိတ်: 49°30′N 64°30′W﻿ / ﻿49.500°N 64.500°W﻿ / 49.500; -64.500
၅၀၀ km (၃၁၀ mi)Excluding the estuary. Ca. 1200 km if included.
၁၆,၈၀၀ m3/s (၅၉၀,၀၀၀ cu ft/s)
၁,၃၄၄,၂၀၀ km2 (၅၁၉,၀၀၀ sq mi)
ဂရိတ်လိတ်စ် မှ စီးဆင်းလာသည့် ရေများသည် ထိုမြစ်အတွင်းစီးဝင်ပြီး အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း စီးဝင်သည်။ မြစ်၏ အရှည်မှာ ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀‌ ကျော်ရှိသည်။ ထိုမြစ်ဝ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ဆုံးပြီး ထိုနေရာသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြစ်ဝဖြစ်ကာ စိန့်လောရင့်စ်ပင်လယ်ကွေ့ ဟုခေါ်တွင်ကြလေသည်။
ကနေဒါမြို့များဖြစ်ကြသည့် ကင်းစတွန်း၊ မွန်တရီရယ်၊ တွိုင့်စ်-ရေဗီရက်စ် နှင့် ကယူးဘက် မြို့များသည် ထို့မြစ်တလျောက်တည်ရှိသည်။ စိန့်လောရင့်စ် ကုန်းတွင်းပိုင်းရေနက်လမ်းကြောင်းတလျောက် သင်္ဘောများ မြစ်အထက်ထိ သွားလာနိုင်ပြီး မြောက်အမေရိကမြောက်ဘက် ဂရိတ်လိတ်စ်တည့်တည့်တလျောက် သွားလာနိုင်သည်။
Wikimedia Commons တွင် Saint Lawrence River နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Annotated Bibliography on St. Lawrence County and Northern New York region. Archived 31 August 2005 at the Wayback Machine.
International Saint Lawrence River Board of Control Archived 23 July 2013 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိန့်လောရင့်စ်မြစ်&oldid=623562" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။